विशेष सम्पादकीय - यौटा नालायकीपनाको पटाक्षेप - Jagaran Post
यौटा नालायकीपनाको पटाक्षेप
नेपालीमा यौटा भनाई छ, घर जलाएर खरानीको जोहो भन्ने। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि हुँदाखाँदाको सुविधायुक्त बहुमतसहितको प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर खरानीको जोहोमा लागेका छन।
चरम असफलता, बदनामी, भ्रष्टाचार, बेथिति, बिसंगती, लापरवाही, गैरजिम्मेवारीपनालाई छोप्न एकै सनकको भरमा आज मुलुकलाई फेरि षड्यन्त्रको चक्रब्यूहमा फसाएर छोडिएको छ।
खासमा हुनुपर्ने संसद विघटन थिएन, ओलीको राजिनामा हुनुपर्थ्यो उतिबेलै। निर्मला बलात्कार अनि हत्याकाण्डमा राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरिएको तथा आफू नेतृत्त्वको सरकारी संयन्त्रले यौटा बलात्कारीसमेत पक्राऊ गर्न नसकेकोमा लज्जाबोध महसुस गर्दै उतिबेलै नैतिकताको आधारमा ओलीले राजिनामा दिनुपर्दथ्यो।
सामाजिक असुरक्षामात्रै होईन, ओली शाषनको ३ बर्षे यस अवधिमा १३ वटा ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भए। ती काण्डमा सत्तासिन मन्त्रीदेखि लिएर नेताकार्यकर्तासम्म मुछिएर आए। कतिपयमा ओली आफै मुछिएर आए। कहिं कतै पनि कसैलाई कारवाही भएन, बरु उल्टै ओलीले जनतालाई नैतिकता र सुशासनको पाठ पढाऊंदै आए, भ्रष्टाचारीको प्रवक्ता बनि उनीहरुको बंचाऊमा ओर्लिए। भ्रष्टाचारीलाई काखी च्यांपे।
कांग्रेसले ३० बर्षमा नलुटेको देश ओली सरकारको पालामा ३ बर्षमैं लुटियो भन्नेमा आम धारणा रहेको छ। भ्रष्टाचार किंचित पनि रोकिएन, दिनका दिन उकालो लागेर गयो भ्रष्टाचारको ग्राफ। ओली सरकार भने देशमा भ्रष्टाचार नै नभएको, कहाँ छ भ्रष्टाचार? भन्दै जनता तर्साऊंदै हिंड्न थाल्यो।
केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानिय तहसम्म भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचारका समाचारले दिनका दिन संचारमाध्यम रंगिए, तर ओलीका सारथीहरु तिनै भ्रष्टाचार खोतल्ने पत्रकारमाथी जंगिए। भ्रष्टाचारविरुद्ध लेख्ने पत्रकारको कलम भाँच्ने हदसम्म ओर्लिए। भ्रष्टाचारविरुद्ध औंलो ठड्याऊने जनतालाई भिजिलान्ते घोषणा गरिदिए। विकाश विरोधी, परिवर्तनविरोधी, स्थायीत्त्वविरोधी घोषणा गरिदिए। लोकप्रिय बाम सरकारविरोधी भन्दै लखेट्ने काम गरियो ओली समुहमण्डलबाट।
जसले ओलीको गुणगान गायो उसले मन्त्रीपद पनि पड्कायो, हाकिमको जागिर पायो। तक्मा विभूषणले विभूषित भयो। मालदार र सुविधासम्पन्न स्थानमा सरुवा पायो। जसले स्तुति गाऊन सकेन उ निरन्तर लखेटिईरह्यो।
बिकाश र सुशासनका त कुरै छोडिदिऊँ, जनतालाई सामान्य राहतसम्मको महसुस ओली सरकारबाट हुनसकेन। हावा गफमा ओली मस्त रहिरहे, नेताकार्यकर्ताबाट तरर ताली पड्किरह्यो, ओली हौसिरहे, कार्यकर्ताहरु अरिंगाल बनेर खनिईरहे। सरकार र नेकपा नेतृत्त्वविरुद्ध बोल्ने, लेख्ने र आलोचना गर्नेलाई धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग ओली मन्त्रीमण्डलका सारथीबाट मात्र होईन, सल्लाहकार हुँदै कार्यकर्तासम्मले गरे।
देशले खोजेको मूख्य कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, बिकाश, सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महंगी नियन्त्रण थियो। यी सबै कुरामा एकपछि अर्को गर्दै असफल हुँदै गएको ओली सरकारले आफ्नो चरम असफलताको लाज लुकाऊन नै संसद विघटन गरिएको भन्नेकुरामा दुईमत छैन।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नक्सा त जारी गर्यो, कार्वान्यनमा उतार्ने हिम्मत गर्न सकेन, जारी चुच्चे नक्सासहितको पाठ्यक्रम छापियो, केपी ओलीकै ठाडो निर्देशनमा वितरणमा रोक लगाईयो।
माफिया र तस्करका सामुन्ने ओली सरकार कतिसम्म निरीह भयो भन्नेकुरा यौटै उदाहरणले दर्शाऊँछ। भारतबाट आऊने विषादीयुक्त तरकारी सिमामा चेकजांच गरेर मात्र नेपाल भित्र्याऊने अंघिल्लो दिनको सरकारको निर्णय १९ असार २०७६ मा भारतीय दुतावासको एक पत्रको भरमा उल्टिएको थियो। यातायातका क्षेत्रमा देखापरेको सिन्डिकेटका सामु ओली सरकार निरीह देखियो, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ब्याप्त विकृति तथा अराजकताको अन्त्य गर्ने भन्दै डा. गोविन्द केसीले जिवनमरणको बाजि लगाएर निरन्तर सत्याग्रह गरिरहे, सरकार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियासामु निरीह बनिरह्यो। राज्यका ठूला टेण्डरमा यति र ओम्नी मिलेर सरकारलाई कब्जामा लिए, सरकार झनै निरीह बन्दै गयो।
जनताले नेकपालाई ५ बर्षको लागि भनेर सुविधासम्पन्न बहुमत दिएका हुन। पार्टिको आन्तरिक झगडा र पदको बाँडफाँडमा देशलाई नै बन्धक बनाऊन अभिमत दिएका होईनन। चरम सत्तालिप्सा र ब्याक्तिगत पदका आकांक्षाका सामुन्ने देशलाई नै पुनश्च: अस्थिरता, अराजकता र अन्यौलतामा धकेल्न जनताले जनमत दिएका होईनन। घरभित्र लागेको आगो घरभित्रै निभाऊने हो, छिमेकीलाई समेट डढाऊने होईन। नेकपाको घरभित्रको आगोले नेकपा त भष्म हुने पक्का भैसक्यो, साथमा सिंगो नेपालको भविष्यमाथी नै डढेलो लगाईदिएको छ। जसका एकमात्र पात्र हुन केपी ओली। आजपर्यन्त केपी ओलीले आम नागरिकको तर्फबाट कहिल्ल्यै माफी पाऊनेछैनन।
देशमा स्थायित्त्व खासमा जनतालाई हैन नपचेको, यिनै शाषकहरुलाई हो। सत्तालिप्साको दुर्नियतमा आफ्नै घरभित्रको आगोको फिलिङ्गोले देश नै डढाऊन उद्धत यस्ता पात्रहरु सदैव तिरस्कारको कोटिमा पर्नेगर्दछन। बिकाशबिरोधी जनता होइनन, शाषक हुन, सुशासनबिरोधी जनता होईनन शाषक हुन भन्नेकुरा विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्दैआएको थियो। जुन आज फेरि पुष्टि भएको छ। खासमा भिजिलान्ते जनता होईनन, शाषक हुन भन्नेकुरा फेरि पनि पुष्टि भएर आएको छ।
अर्कोतर्फ जनताको करबाट पालितपोषित राष्ट्रपति कार्यालय केवल नेकपा अझ विशेष गरेर ( ओली खेमा ) को मात्र रवरस्ट्याम्प बन्नु आफैमा लज्जास्पदमात्र होईन, करोडौं नागरिकको अपमान पनि हो। सरकारका हरेक निर्णयहरुमा आँखा बन्द गरेर सदर गर्नकै लागि राष्ट्रपति कार्यालयको स्थापना गरिएको होईन। सर्वाङ्गिण देशको हितलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रको अभिभावकिय जिम्मेवारीमा बस्नुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति कुनै समूहविशेषको रवरस्ट्याम्पझैं प्रयोगमा आऊनु र ल्याईनु अत्यन्तै विडम्वनाको कुरा हो। राष्ट्रपतिय पद्धतिकै मानमर्दन र बेईज्जती पनि हो।
प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको सिफारिस निर्वाचनमा व्यक्त जनमत र संविधान विपरित हो । संविधानको संरक्षकको नाताले उक्त कदम सच्याउन राष्ट्रपतिबाट उपर्युक्त भूमिका निभाईनुपर्थ्यो, जुन हुन सकेन। सदाकोझैं यसपाली पनि राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति रवरस्ट्याम्पको रुपमा प्रयोगमा आईन, ल्याईयो। योसंगै नेपालको इतिहासमा आज २०७७ साल पौष ५ गते आईतवारको दिन अर्को कालो दिनको रुपमा थपिएको छ।
१.सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न सुवेदीको योग्यता पुग्ने सर्वोच्चको फैसला
२.नेप्से परिसूचकमा हालसम्मकै उच्च विन्दुमा
३.कोरोना नेपाल : थप ४९६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण, १३ जनाको मृत्यु
४.आङ सान सुकीमाथी छ ओटा नयाँ आरोप
५.भारतमा कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख ७० हजार नाघ्यो
६.२१ वर्षीय युवाले गरे मेचिमहाकाली पैदलयात्रा सम्पन्न
७.बुटवलमा कोरोना कारण थप तीन जनाको मृत्यु
८.मनकामना केबुलकार आजदेखि नियमित सञ्चालनमा
९.रुपन्देहीको एक पेट्रोल पम्पमा आगलागी हुँदा लाखौँको क्षति
१०.रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका द्वारा ६ वटा विद्यालयलाई बस प्रदान